यस्तो ठाउँ जहाँ ७० वर्षदेखि मान्छे म’रेका छैनन्, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ! - Like For Nepal
यस्तो ठाउँ जहाँ ७० वर्षदेखि मान्छे म’रेका छैनन्, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
संसारमा धेरै अनौठा ठाउँहरू छन्, जसलाई थाहा पाउँदा मानिसहरू विश्वास गर्न सक्दैनन् । एउटा यस्तो ठाउँ छ जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ।
आउनुहोस् हामी तपाईंलाई यो अनौठो ठाउँको बारेमा बताउँछौं जहाँ ७० वर्षमा कुनै पनि मानिसको मृ’त्यु भएको छैन ।यो सुन्दा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर यो पूर्ण सत्य हो । त्यहाँ कोही पनि बस्दैन होला भन्ने प्रश्न पनि मनमा लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन ।
यहाँ मान्छेहरू पनि बस्छन् । तर, यो अनौठो ठाउँमा कसैको मृ’त्यु भने भएको छैन ।यो अनौठौ ठाउँ नर्वेमा छ । यहाँ धेरै सुन्दर ठाउँहरू छन्, जसकारण यो विश्वको प्र’सिद्ध पर्यटकीयस्थलहरूमा समावेश छ । नर्वेको यो ठाउँको नाम लङ इरबेन हो ।
यो ठाउँमा कोही म’र्न सक्दैन, यसको कारण थाहा पाएपछि तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्नेछ कि यस्तो किन ?नर्वेलाई मि’डनाइट सन पनि भनिन्छ । यो देशमा मे महिनादेखि जुलाईको अन्त्यसम्म सूर्य अस्ताउँदैन । यहाँ ७६ दिन लगातार दिन हुन्छ र रात हुँदैन ।
यहाँको स्वाल्बार्डमा पनि अप्रिल १० देखि अगस्ट २३ सम्म सूर्यास्त हुँदैन । लङ इरबेनमा यहाँको प्रशासनले कानून बनाएको छ, जसका कारण यहाँ मानिस म’र्न सक्दैनन् । यहाँ मानिस मर्न प्र’तिबन्ध लगाइएको छ ।नर्वेको उत्तरी ध्रवमा अवस्थित लङ इरबेनमा वर्षैभरि अत्यधिक चिसो हुन्छ, जसकारण यहाँ श’व स’ड्दैन ।
त्यसैले यहाँ प्रशासनले मानिस म’र्न प्र’तिबन्ध लगाएको छ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा के छ भने यो शहरमा ७० वर्षदेखि कोही पनि मरेका छैनन् । एक सय वर्षअघि भएको थियो मृ’त्यु : यस अनौठो शहरमा क्रि’श्चियन ध’र्मका धेरै मानिसहरू बस्छन् ।
सन् १९१७ मा यहाँ इन्फ्लुएन्जाबाट पी’डित एक व्यक्तिको मृ’त्यु भएको थियो । मानिसको श’व लङ इयरबेनमा गा’डिएको थियो, तर उनको शरीरमा अझै पनि इ’न्फ्लुएन्जा भाइरस छ । जसकारण शहरलाई महामारीबाट जोगाउन प्रशासनले यहाँ मृ’त्युमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
यस शहरको जनसंख्या करीब २००० छ । यहाँ कोही बि’रामी परेमा विमानबाट अर्को ठाउँमा लगिन्छ । त्यसपछि सोही ठाउँमा मृ’त्युपछि त्यस व्यक्तिको अ’न्तिम सं’स्कार गरिन
Prevमलेसियामा केटिकै कारण हराउँदैछन् नेपाली युवाहरु !
Nextनागरिकताको सिफारिसमा नै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस ! (लुटतन्त्रकाे बिराेधका लागि सेयर गराैं)